ရုံးရှေ့ … က…ဆွဲလဲသံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရုံးရှေ့ … က…ဆွဲလဲသံ
ရုံးရှေ့ … က…ဆွဲလဲသံ
- nay khin
Posted by nay khin on May 8, 2013 in Copy/Paste |7comments
” ရုံးရှေ့က ဆွဲလဲ သံ ” ………….
ကျွန်တော်တို့ရုံးရှေ့က ဆွဲလဲ သံလေးအကြောင်းမိတ်ဆွေတို့ကိုသိအောင်ပြောပြပေးခြင်ပါတယ် ဒီလိုပါခင်ဗျ…..
ကျွန်တော် ဒီရုံးမှာ (2009) ခုနှစ်မှ စတင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ် ….ကျွန်တော်က နယ်မြို့လေးက လာခဲ့တာဆိုတော့ ရွှေမန်းလေးက ဆွဲလဲသံတွေကို ခုမှ ကြားဖူးတာပါ။ စားကောင်းခြင်းမစားရ ထိုင်ကောင်းခြင်း မထိုင်ရတဲ့အထဲ မှာ မန်းလေးမြို့ကထိပ်ဆုံးက ဖြစ်နေပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ရုံးက တနင်္ဂနွေ တစ်ရက်ပဲ ရုံးပိတ်တာဆိုတော့ အားလပ်ရက်လေးမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ကြမယ် ဘုရားကြီးသွား ဖူးကြမယ် ။ ဟိုတစ်ချိန် ကျောင်းသားဘဝက လျှောက်ခဲ့ကြတဲ့ ဦးပိန်တံတားကို သွားလျှောက်ကြမယ် အသီးသီင်္းပေါ့ဗျာ ရုံးပိတ်ရက်ဆိုတော့ ဟိုရောက်ဒီရောက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် လျှောက်လယ်ကြပါတယ်။ အဓိက ကတော့ဗျာ လ္ဘက်ရည်ဆိုင် ထိုင်လိုက်တယ် ဆိုပဲ ဗျာ အလှူခံ ပုဂိ္ဂုလ်တွေ ကြွလာပါတယ် တစ်ချို့ကတော့ တတ်နိုင်သလောက် လှူတန်းကြတယ် တစ်ချို့ကတော့ ကတော့ဆွမ်းပါ ဘုရားပေါ့ ။ တတ်နိုင်သလောက် လှူလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ဦးဇင်၊ ကိုရင်၊ ဖုန်းတောင်းယာစကာ အဆုံး တစ်သောသော အုံလာတတ်ပါတယ်။ ဘုရားကြီးရောက်တယ်ဆိုရင်လဲ ပန်းအတင်းရောင်းတဲ့သူနဲ့ မဝယ်ရင် ရိုတ်တော့မဲ့ အတိုင်း ပါပဲ… ပုံမှန်ရက်တွေဆိုရင် ဆိုင်ကယ်အပ်ခ တစ်စီး သုံးရာကျပ် လပြည့်နေ့နဲ့ အခါရက်တွေ ဆိုရင် တစ်စီးကို ငါးရာကျပ် ကုန်ကျပါတယ်။
ပိုက်ဆံ မရှိရင် ဘုရားဖူးသွားဖို့ ခက်ခဲနေတာပေါ့ဗျာ… ဘယ်နေရာ မဆို အသိတရား က အရေးကြီးပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသား ၊ ဘာသာခြားတွေက ဗုဒ္ဒဘာသာ တွေကလဲ အင်မတန် အောက်ကျတာပဲလို့ ခံယူသွားကြမှာသိပ်ကို ရှက်စရာကောင်းပါတယ်။ အရာရာကို ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ် ။ ဘုရားကြီးထဲမှာ နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် ဗျ ဦးဇင်းက စာအုပ်လေး အလှူခံ ခြင်လို့ပါ စာအုပ်တစ်အုပ်လောက်ဆိုရင် ရပါပြီ ဆိုတာက ရှိသေးတယ်။
ရုံးဖွင့်ရက်တွေဆိုရင်တော့ ရုံးထဲမှာ ငွေခံလာတဲ့သူ အရောင်းထွက်တဲ့သူ၊အဝယ်ထွက်တဲ့သူတွေနဲ့ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ စည်းကားနေတာပေါ့ဗျာ ။ သူ့တာဝန် ကိုယ့်တာဝန်တွေ တာဝန်ကိုစီ ထမ်းဆောင်ကြရင် တစ်နေ့တာရဲ့ အချိန်တွေကို ကုန်မှန်းမသိကုန်ဆုံးသွားခဲ့ ကြပါတယ် … တစ်နေ့ တစ်နေ့ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကလဲ ရုံးရှေ့မှာ ဆွဲလဲသံက အရှုုံးပေးရလောက်ပါတယ်။ ရုံးရှေ့လား ဆိုတော့ ရုံးထဲမှာ လဲ အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ် လစဉ်ကြွလာတတ်ပါတယ် ။ လူကြီးတွေလဲ အားတဲ့အခါရှိသလို အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့ ရက်တွေဆိုရင် လူကြီးတွေလဲ မနားရပါဘူး။ ဝန်ထမ်းငယ်လေးတွေက အလှူခံလာတယ်ဆိုရင်ပဲ အမျိုးမျိုး ဖြေရှင်းပေးရပါတယ်။ လူကြီးတွေက အစည်းအဝေးလုပ်တယ် တစ်ချို့က ဘဏ်ငွေထုတ် သူထုတ်ဆိုတော့ ထိုအလှူခံပုဂိ္ဂုလ်က ဟိုလူကြီးကို ဖုန်းဆက်ပေး ဒီလူခေါ်ပေး ပြောပြန်တော့ ဝန်ထမ်းငယ်တွေမှာ တကယ်အကျပ်ရိုတ်ကြရပါတယ်။
ကျွန်တော်လဲ ရုံးကိုရောက်ခါစ (2009)ခုနှစ် အလုပ်စဝင်ခါစ ဆိုတော့ ဆွဲလဲသံလေးတွေအကြောင်းက မသိသေးဘူးဗျာ..ရုံးထဲက ဘာသာခြားပုဂိ္ဂုလ်တစ်ယောက်က မလှူနဲ့တော့ အလကား အလိမ်တွေ လို့ ပြောသံလေးကြားတော့ ရင်ထဲမှာကြိတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ် ….နောက် အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေ ဘုန်းကြီးလက်မှတ်တွေနဲ့ ပရဟိတ အတွက်အလှူခံပါတယ် ဆိုတော့ တတ်နိုင်သလောက်လှူပေးပါတယ် နည်းတယ်ဆိုပြီးထပ်လှူဖို့ပဲပြောနေတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ စိတ်ရင်းအမှန်ကတော့ဗျာ စေတနာသုံးတန်ပြတ်ပြီး တတ်နိုင်သလောက်လှူမယ် မတတ်နိုင်ရင် ကတော့ဆွမ်းကလဲ ကုသိုလ်ရပါတယ်။ အလျုခံသွားတဲ့ပုဂိ္ဂုလ်က သူ့ဟာသူ ဘာပဲလုပ်လုပ် လှူလိုက်တဲ့ ပုဂိ္ဂုလ်က စေတနာပြတ်ရင် ကုသိုလ်ရပါတယ်။ အလှူခံပုဂိ္ဂုလ်က မသန့်ရှင်းရင် သူ့လမ်းနဲ့သူ တစ်လမ်းမောင်းဆိုတာရှိပါတယ် သူ့လမ်းသူသွားပါလိမ့်မယ် လို့ ခံယူမိပါတယ်။
ရှေးယခင်က ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ အင်မတန်နူညံ့သိမ်မွေ့ယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့ သဒါ္ဒတရား၊ အကျင်နာတရား ပရဟိတ စံနမူနာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ခု ချိန်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ဘာကိုအခြေခံထားလဲ ဘာကိုရည်ညွန်းထားလဲ လို့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကများ မေးခဲ့ရင် မိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုဖြေဖို့ ရည်ရွယ်ထားကြပါသလဲ… ကိုယ့်ဘာသာကို အလေးထားပေးကြပါ ရှက်တတ်ကြပါ ပရဟိတ၊လုပ်ပေးကြပါ…
ရှက်ကြောက် ရိုသေခြင်းတရားကို လက်ကိုင်ထားပေးပါ စည်းကမ်းရှိကြပါ။ တစ်ချိန်က စည်းကမ်းဖောက်လို့ ထီးနန်းပျောက်ခဲ့ရတယ် ယခုချိန်မှာ လူမျိုးပါ ပျောက်ဆုံးနိုင်ပါတယ်…မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာမို့ ကိုးကွယ်တာထက် ကိုယ်ကိုတိုင် သက်ဝင်ယုံကြည့်ဖို့ လဲလိုအပ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အချင်းချင်း ကူညီအားပေးဖို့လဲ လိုပါတယ် ။ ယခုမျက်မှောက် တွေ့ရသလောက်တော့ ဘယ်သူ့ကိုခြေထိုးရရင် ကောင်းမလဲ ဘယ်သူ့ကိုလိမ်လယ်ရမလဲ သယ်အကျိုးစီးပွား၊ ဘယ်သူ့အိမ်ထောင်ရေးပျက်စည်းအောင်လုပ်ရမလဲ ဆိုသူက များနေပါတယ်။ မွှေးဖွားလာတဲ့ သားသမီးတွေကို ဆုံးမဩဝါဒ ပေးဖို့ မိဘတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဘယ်ဘာသာမဆို ဒီလိုပျက်စီးအောင်လုပ်တဲ့ အကျင့်ကတော့ မကောင်းပါဘူး။ မှုရင်းကောင်းမှ မိတ္တူကောင်းတယ် ၊ မျိုးစေ့ကောင်းမှ ကြီးထွားလာတဲ့ အပင်မျိုးကလဲ ကောင်းပေမှာပေါ့။ မိဘ မျိုးရိုးက မျိုးဖျက် ငါးပါးသီလ မလုံတဲ့ မိဘမျိုးရိုးက လာရင် မျိုးဆက်သစ်ဟာလဲ ဒီတိုင်းသွားကြလိမ့်မယ်။
သီးချိန်တန်သီးပွင့်ချိန်တန် ပွင့်ဆိုပေမဲ့ ယဉ်ကျေးမှုရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။ ရုံးတက်လာကြပါတယ် ဟိုပေါ်ဒီပေါ် နဲ့ အထဲကဘာရောင်ဝတ်သလဲ ကအစပေါ့ ရုံးလာတာ နိုက်ကလပ်နဲ့ မှားလာသလိုပါပဲ။ ရုံးပိတ်ရက်လျှောက်လယ်ကြရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့ဗျာ ဒါလဲ လွန်ပါတယ် ဇီးဒိုးကွာတ ဝမ်းကွာတနဲ့ လယ်နေကြတယ်။ ကို့ရဲ့အရှက်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ အတွက် အဝတ်တန်ဆာဆိုတာဝတ် ဆင်ကြတာပါ ။ ခုခောတ်က ကျောက်ခောတ်က လူသားတွေလို ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ ဘာဘာသာကိုးကွယ်လဲ မေးခဲ့ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာပါလို့ ပြောရမှာ သူများကိုယ်စားရှက်မိပါတယ်။ မိမိလူမျိုး မိမိဘာသာ ဂုဏ်သိက္ခာ အတွက် အရှက်ရှိကြပါ။ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ မိမိနိုင်ငံ မိမိလူမျိုး မိမိဘာသာ မိမိ မိသားစု ကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း စာစုတိုလေးနဲ့ပဲ ပြောပြပါရစေ ….
ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်ကျောင်းသား ဘဝ က သစ္စာလေးချက်ကို ပြန်ရွတ်ပြမယ်နော်
ကျွန်တော်တို့သည် မိမိနိုင်ငံအပေါ် ကောင်းအောင်ကျိုးစားမည်
ကျွန်တော်တို့သည် မိမိအမျိုးကို ကောင်းအောင်ကျိုးစားမည်
ကျွန်တော်တို့သည် မိမိကျောင်းကို ကောင်းအောင်ကျိုးစားမည်
ကျွန်တော်တို့သည် မိမိ မိသားစုကို ကောင်းအောင်ကျိုးစားမည်…..တဲ့ဗျာ
သူများမိသားစု ဒုက္ခပေးမည် လို့ ဘယ်လူမျိုး ဘယ်ဘာသာမှ မဆိုခဲ့ကြပါဘူး မိမိဘာသာ မိမိလူမျိုးထိန်းသိမ်းရင်း အရှက်နှင့်ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိကြပါလို့ ထပ်ဆင့်ပြောပါရစေ….
ပေါင်းလိုက်တော့ နေမင်းခင် ပေါ့ဗျာ….
About nay khin
nay khin has written6post in this Website..
View all posts by nay khin →
ကိုနေမင်းခင်စိတ်ထဲ ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာကို ကောင်းကင်ပြာလဲ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်….။ ဘာသာကို အခြေပြုပြီး ကိုယ်ကျိုးလုပ်နေကြတဲ့သူတွေကို သနားစရာလို့ပဲ မြင်လိုက်ပါ…။ သူတို့မို့ ငရဲမကြောက်ဘာမကြောက် တစ်ဘဝစာအတွက်ရင်းနေကြတယ်…။ အဲ့ဘက်မှာ ဖုန်းတောင်းယာစကတွေ များတာလဲ သိပါတယ်…။ နေ့တဓူဝကြာလာတော့ စိတ်ရှုပ်လာရတာကိုလဲ သိပါတယ်…။ အကောင်းဆုံးကတော့ ရုံးကလူကြီးတွေ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ အလှူခံမဝင်ရ ဆိုတာ ချိတ်ထားလိုက်တာ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်…။ ဒါဆို ပစ္စည်းပျောက်ဘာညာကအစ စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့….။ ခုအရွယ် တောင်းပြုကောင်းပေမယ့် အသက်ကြီးလာလို့ တောင်းမရတော့ရင် ပညာမတတ်၊ လက်ကြောမတင်းနဲ့ ခါးပိုက်နှိုက် သူခိုးဂျပိုးလေးတွေဖြစ်ဖို့အလားအလာ အများကြီးရှိတဲ့ ခလေးငယ်တွေအရေးကလဲ ရင်လေးစရာပါရှင်…
” တတ်နိုင်သလောက် လှူလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ဦးဇင်၊ ကိုရင်၊ ဖုန်းတောင်းယာစကာ အဆုံး
တစ်သောသော အုံလာတတ်ပါတယ် ”
ကျနော်လည်း အရင်က အကျင့်တစ်ခု ရှိခဲ့ပါတယ် ။
ငါလည်း တတ်နိုင်နေတာပဲ ၊ ဒီလောက်လေး လှူရုံနှင့် ဘယ်လိုမှ မွဲမသွားနိုင်ဘူး ။
ရဟန်း ၊ ကိုရင် ၊ မယ်သီလရှင် တွေ စစ်မစစ်က သူတို့အပိုင်း ၊ လှူတာက ကိုယ့် အပိုင်း ။
ငါ့ သာသနာ ၊ ငါတို့မှ အားမပေးရင် ဘယ်သူ အားပေးမလဲ ။
ငါ့ဆီ လာအလှူခံသမျှ ရဟန်း ၊ ကိုရင် ၊ မယ်သီလရှင် တွေ ၊ လက်ချည်း မပြန်စေရ ဆိုပြီး ။
အဲဒီ အချိန်တုန်းက ဆိုရင် ၊ ၅ဝ တန်လေးတွေ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ စုကိုထားခဲ့တာ ။
သို့ပေမယ့် ။ သို့ပေမယ့် ပေါ့လေ ။
သူတို့ချင်းက ၊ အချိတ်အဆက် ရှိကြတယ် ( ထင်ပါတယ် ) ။
တစ်ပါး ကို လှူပြီးရင် ၊ ဆက်တိုက်လာကြတယ် ခမျ ။
နောက်ဆုံး ၊ သူငယ်ချင်းတွေနှင့် ကောင်းကောင်းကို စကားမပြောရတော့ဘူး ။
အဲဒါနှင့်ပဲ ၊ နောက်ဆုံးမတော့ အဲဒီ သံဓိဋ္ဌာန်ကို လက်လျော့လိုက်ရပြန်ရော ။
ကျွန်တော်လဲ သံဓီဌာန်ချထားတယ် ။
ဘယ်တော့မှ ဘယ်သူ့ကိုမှ လမ်းမှာ မထည့်ဘူး ဆိုတာ။
မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဗမာများဟာ တော်တော်လေးကို အားနာတတ်ကြတာကလား
ခေ တ် ကြီး က လဲ ငွေရှာရ အရမ်းခက်နေတဲ့ ခေ တ်ကြီး ဆိုတော့
အဲဒါ ကို အခွင့်ရေးယူပြီး လုပ်စားကြတာပေါ့ဗျာ
ဘုရားစိန်ဖူးတော် တောင် ၊ ပိုက်ဆံရှိတွေ တက်ခိုးကြသေးတာပဲ
ဒီ ဘာသာက တစ်ယောက်မကောင်းတာတွေ့ခဲ့ရင် ဒီ ဘာသာတရားက မကောင်းဘူးလို့ သိမ်းကြုံး ကောက်ချက်ချလို့မရသလို
ဒီ တစ်ယောက်မကောင်းတာမြင်ရုံနဲ့ ဒီ အမျိုးက မကောင်းမျိုးပါ လို့ ခြုံပြောလို့လည်း မရပြန်ဘူး။
လူတိုင်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ကောင်းအောင် ကြိုးစားနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပေါ့နော်။
လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကောင်းအောင် နေမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ရှိတဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းလေးက ကောင်းလာမှာပေါ့။
– ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကောင်းမွန်အောင်နေမယ်
– သူများကို စိတ်သန့်သန့် စေတနာ မေတ္တာထားမယ်။
– အပြော၊အဆို အမူအရာ ရည်မွန်မယ်။
ဒီလောက်ဆို လူကောင်းတစ်ယောက်လို့ သတ်မှတ်လို့ရနေပြီထင်ပါရဲ့။
ကျနော်တော့ ကိုယ်တိုင်ကို စပြင်နေတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့။
အနည်းဆုံး ကိုယ့်ကြောင့်တော့ ကိုယ့်ဘာသာ၊ လူမျိုး၊ သိက္ခာ မထိခိုက်နိုင်အောင်လို့။
တစ်ခြား ဘယ်သူ့မှ ပြင်မပေးနိုင်ဘူးကိုး။
“မိမိ ကိုယ်ကို ကောင်းအောင် အရင် ကြိုးစားမည်” ပေါ့နော်။